Indlela yeBhere - indawo eyingqayizivele egcwele umlando ku-Asturias | Ukuhamba kwe-Absolut
Sithanda izikhala zemvelo, bonke labo abahlala befihla izimfihlo eziningi ngemuva kwabo. Ngakho-ke, namuhla sisele ne- Indlela yebhere. indawo eyingqayizivele, eyakhiwe izigaba eziningana ezisifaka ebuhleni be-Asturias. Uma ufuna ukuthula, ukuthola imvelo nokunqamula, nansi indawo yakho.
Kuzoba enye yezintandokazi lapho usuzokwazi kancane. Ngoba ithwala ingxenye yayo yomlando nokuthi njengoba sisho, ihlala inokuthile ukusikhombisa okuzosenza sifune okuningi. Ungaphuthelwa yilokhu indlela yohlobo lwabahamba ngezinyawo, onendlela elula futhi enezindawo zokuphumula ezizungezwe imvelo.
1 Ungafika kanjani eSenda del Oso
1.1 Kusuka ku-Oviedo
1.2 Kusuka eGijon
1.3 Kusuka eSantander
2 Yini iBear Path e-Asturias
3 Izingxenye zePath
3.1 Ukwelula kokuqala
3.2 Isigaba sesibili
3.3 Isigaba sesithathu
4 Indlela yebhere, mangaki amakhilomitha?
5 Indlela yebhere ngebhayisikili
6 Izincomo okufanele uzigcine engqondweni
Ungafika kanjani eSenda del Oso
Njengoba sesivele sazi, le ndawo itholakala e-Asturias, kepha kusukela kulokhu, sizokwazi kancane lapho itholakala khona nokuthi singafika kanjani lapho siqala kusuka emadolobheni avame kakhulu.
Uma ukuhamba kwakho kusuka e-Oviedo, lapho-ke kufanele uthathe i-A-63 ubheke eGrado. Ngemuva kwalokho, phuma ku-9 ubheke ku-N-634 Trubia. Manje kufanele sithathe indlela entsha ebheke eSanto Adriano - Proaza. Lapho sifika eCaranga debajo, sijika sibheke eSan Martín de Teverga. Lapho sibona idolobha i-Entrago sizoya kwesokudla size sibone indawo yokupaka okuyiyona ekhomba ukuqala kweNdlela.
Kungenzeka ukuthi ukuqala kwakho kube yiGijon, bese uzothatha i-A-66 ubheke e-Oviedo. Ngemuva kwalokho i-A-63 ibheke eGrado. Ukuphuma kunombolo 9 kukuyisa ku-N-634 Trubia. Uma sesilapha, futhi kunento edlule esishilo, okungukuthi, ebheke eSanto Adriano - Proaza.
Okokuqala kuzodingeka uthathe umgwaqo omkhulu oya e-Oviedo A8. esikhundleni salokho uthathe u-A-63 ubheke Grado, njengoba siphawule ezigabeni ezedlule.
Yini iBear Path e-Asturias
Kuyindlela noma indlela yabahamba ngezinyawo. Kulokhu, inezigaba ezivundlile ezinqamula amahlathi nezintaba zombili. Senziwa kujantshi wakudala wesitimela lapho eminyakeni eminingi edlule, isitimela sezimayini sidlula esakha ukuvakasha kwesigodi somfula iTrubia. Lokhu sizokwenza, kepha ngaphandle kwesitimela. Njengoba lokhu kwakusetshenziswa kuze kube maphakathi no-60s futhi kwakuphethe ukuthutha kokubili i-iron namalahle. Kepha izimayini bezikhathele futhi zingasizi ngalutho bekufanele zivale. Ngakho-ke ngemuva kwalokho, banquma ukugcina ubuhle besigodi ngokwenza lo mzila. Ngaphezu kwalokho, inemihubhe, amadamu ngisho neNdlu yeBhele noma i-Ethnographic Museum yaseQuirós.
Kuyiqiniso ukuthi akukho ukujaha ukuvakashela le ndawo, ngakho-ke kujwayelekile ukuyihlukanisa izigaba ezimbili noma ezintathu. Uma owokugcina kungukukhetha kwakho, ungenza isigaba sokuqala esingaba amakhilomitha ayi-6, esesibili sazo, u-18,5 bese kuthi esesithathu bese sigcina sibe amakhilomitha amane nohhafu. Le ngxenye yokugcina ezobandakanya indawo ephakathi kweCaranga neValdemurio ibe ngeyokugcina ukwethulwa.
Njengoba sisho, ungazenza noma uzihlukanise ngezindlela ezahlukahlukene. Kepha kufanele uhambe endaweni yokuzilibazisa yaseTuñón. Lesi sigaba sokuqala sibe ngesokuqala ukwethulwa. Ngemuva kwalokhu kuphuma, sidlula ebhulohweni iLa Esgarrada bese kuba elinye ibhuloho elika-El santo elisisa eVillanueva. Lapho singabona i- Umhosha wamaXana. Uzojabulela ibhuloho laseRoma futhi uzobona indawo yokuzijabulisa. Ngaphandle kokuphuthelwa iMonte del Oso, ebizwa kanjalo ngoba kunezinhlobo eziningana zamabhere namabhere.
Njengoba sesifikile eProaza, siqala ukusuka lapha sidlule endaweni yezintaba. Ukusuka eCaranga kuye emhosheni wePeñas Juntas, udlula eSillón del Rey nasePeña Armada.
Imfushane kakhulu kunangaphambili futhi nayo iqala kusuka UCaranga eProaza ngasechibini laseValdemurio. Ngemuva kokudlula uPeñas Juntas, sithatha uhlangothi lwesobunxele nangemva kweCaranga debajo, uzoqhubeka nendlela yakho ehambisana nomgwaqo. Enye indawo lapho ubuhle bendawo bungekude emuva.
Indlela yebhere, mangaki amakhilomitha?
Kungashiwo ukuthi ukwenza indlela eyisisekelo kakhulu noma ejwayelekile, sizobe sikhuluma ngalokho indlela yebhere ingamakhilomitha ayi-18. Kepha njengoba sishilo cishe ekuqaleni, kuyiqiniso ukuthi ungahlala ukuvumelanisa nezidingo zakho. Kungakho ungahlala ungeza ezinye izigaba futhi ufinyelele echibini laseVillamurio noma ubheke eQuiros futhi naseBuyera. Lapho uzothola zonke izindawo zichazwe kahle, ukuze ungabi nalo uhlobo lwenkinga futhi ungakhetha.
Indlela yebhere ngebhayisikili
Ungayenza ijabulise kakhulu futhi uqashe ibhayisikili. Banayo le nsizakalo, ukuze abantu asebekhulile babe namabhasikidi akhethekile amancane kunayo yonke indlu noma i-tandem. Ukuqashwa okufanayo, kufaka nokuthi bangakusiza uma uludinga noma uwathathe kunoma yimaphi amaphuzu. Ukuthi induduzo isho ukuthini ukuthi imindeni eminingi ikhetha ukuhamba ngale ndlela ngebhayisikili futhi iyeke kaningi ukuphumula ezindaweni zokuzithokozisa ezenzelwe yona.
Izincomo okufanele uzigcine engqondweni
Ngaphezu kwezindawo zokuphumula, uzothola nezikhundla ezahlukahlukene ukuze ukwazi ukudla okuthile. Noma kunjalo, unamadolobha ahlukahlukene aseduze, lapho ungama khona ukuze udle. Yiyo futhi le ndawo onakho okuningi amahostela njengezindlu zezwe. Kepha yebo, ngenkathi ephezulu bazogcwala impela, ngakho-ke kungcono njalo ukubhuka kusengaphambili.
Kumele kuthiwe ungahamba nezilwane ezifuywayo nokuthi indawo elula ukuyenza. Ngalokho kufanelekile iminyaka yonke, ngoba ezimweni eziningi kakhulu, sizithola sinendlela elula kodwa futhi engezansi. Ungaqala ukuhamba kwakho uzungeze i-10 ekuseni, okungenye yezikhathi ezinhle kakhulu zokusebenzisa lolu suku. Khumbula ukuletha izingubo zikanokusho nobhaka onamanzi nento ongazidla ngayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Indlela yebhere